Ny fampiatoana sy ny familiana an'i Knuchles Parts-Z5020 mpanamboatra sy mpamatsy | TANGRUI
Ampahany amin'ny Assembly of Knuckle Steering
Ny knuckles mamily dia mampifandray ireo singa familiana sy fampiatoana. Araka izany dia misy faritra ampiarahina amin'ireo faritra sy fivondronan'ny rafitra fampiatoana na familiana. Ny kodiarana koa. Ny ampahany lehibe amin'ny familiana dia misy
Fonenana ambony noho ny fitifirana baolina na ny lavaka mololo
Fiakarana ho an'ny sandry fanaraha-maso ambony amin'ny fampiatoana ny endriny ary fidio ho an'ny karazana fiatoana MacPherson
Fametahana tsorakazo na sandry familiana
Fiakarana ho an'ny sandan'ny fanaraha-maso na ny ambany
Teboka hametahana kalifera vaky
Ny kisary familiana etsy ambony dia maneho ireo ampahany ireo. Mariho fa ny singa dia mety ho samy hafa habe sy endrika. Ny kinova ao anaty fiaranao dia mety, noho izany, dia tsy mitovy amin'ny an'io amin'ny sary io. Ny lamina ankapobeny dia mijanona ho iray, na izany aza, miankina amin'ny karazana knuckle.
Ity knuckle familiana ity dia voarindra tsara ary voasedra mafy mba hanomezana solony azo antoka ny knuckle voalohany amin'ny fiara manokana.
Fanoloana mivantana - ity knuckle familiana ity dia natao hanoloana ny knuckle voalohany amin'ny fiara manokana
Fahazoana azo itokisana - namboarina tamin'ny maotera mba hifanaraka amin'ny refin'ny singa voalohany
Fananganana mendri-pitokisana - vita amin'ny fenitra henjana amin'ny alàlan'ny fitaovana maharitra
Voasedra mafy - ny fepetra fanaraha-maso kalitao tanteraka dia manome antoka ny faharetana
Inona no atao hoe knuckle mamily kalitao tsara?
Rehefa mividy ny knuckle mamily anao dia mila kalitao tsara indrindra ianao. Ary koa, iray izay mifanaraka amin'ny karazana fiara sy maodelinao. Diniho ireo antony ireo.
Raha tsy olana ny lanjany dia tokony hatao ny knuckle vy. Raha tsy izany dia afaka mandray soa ianao amin'ny lanjan'ny aluminium ambany. Ny fiara mifatotra mazàna dia mila singa maivana, fa ny fahaizany miaritra fahasimbana no tadiavin'ny fiara mahery.
Ny knuckles mamily amin'ny ankapobeny dia namboarina mba hifanaraka amin'ny fiara manokana. Araka izany, tsy tokony hifidy izay mifanaraka amin'ny takian'ny fiara ianao. Ireo mpivarotra faritra dia afaka manampy anao hisafidy izay mety. Rehefa mividy an-tserasera dia angataho ny mombamomba ny fiaranao hitady ilay knuckle tery.
Ny knuckles sasany dia sarotra apetraka raha ny hafa kosa mety hipetraka ho toy ny lahasa DIY. Ireo karazana mora apetraka dia misy ireo izay efa nangonina. Raha mieritreritra ny hanatanteraka ny fanoloana knuckle familiana ny tenanao, safidio ny karazana mety indrindra.
Raha mitondra fiara ianao amin'ny toe-javatra mafy dia hahazo tombony amin'ny knuckle voaaro tsara ianao. Ny singa dia mety manana famaranana samihafa, izay miovaova ihany koa amin'ny mpanamboatra samihafa. Ny mety amin'ny toe-javatra iainanao dia tena ilaina mba hanomezana fiarovana amin'ny harafesina.
Previous: Knuchles familiana ho an'ny Volkswagen Beetle -Z2490
Manaraka: Oem 42200-SR3-A02 Ary 42200-SR3-A52 Wheel Hubs-Z8040
Hub avo kodiarana avo lenta ho an'ny Suzuki-Z8047
Kalitao avo lenta fiara mitambatra ho an'ny NISSAN-Z ...
Knuckle familiana eo aloha, Shock Absorber fingotra, Hub misy kodiarana, Hood Shock Absorber, Tyre Ball Joint, Shock Absorber Bolt,